ကိုလ်ကတ္တားမြို့ကို အမ်ဖန်မုန်တိုင်း ဝင်ရောက်နင်းချေ
ကိုလ်ကတ္တားမြို့ကို အမ်ဖန်မုန်တိုင်း ဝင်ရောက်နင်းခ...
21 พ.ค. 2563 - 22:27 น.
အိန္ဒိယအရှေ့ပိုင်းက ကိုလ်ကတ္တားမြို့ကို အင်အားပြင်း အမ်ဖန်ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း ဝင်ရောက်ဖျက်ဆီးသွားခဲ့ပါပြီ။
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့က ကမ်းရိုးတန်းဒေသကို အမ်ဖန်မုန်တိုင်း ဝင်ရောက်ပြီး မိုးကြီး၊ လေပြင်းတိုက်ခဲ့ပါတယ်။
အိန္ဒိယအရှေ့ပိုင်းနဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်တို့မှာ လေပြင်းနဲ့ မိုးကြီးမြေပြိုမှုကြောင့် လူ ၈၄ ယောက်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။
အိန္ဒိယနိုင်ငံက အနောက်ဘင်္ဂလားပြည်နယ်မှာလူ ၇၂ ယောက်နဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာ ၁၂ ယောက် သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။
လူဦးရေ ၁၄ သန်းရှိတဲ့ ကိုလ်ကတ္တားမြို့မှာ လျှပ်စစ်မီးပြတ်နေသလို အဆက်အသွယ်တွေလည်း ပြတ်တောက်နေပါတယ်။
မုန်တိုင်းတိုက်စဥ် ရေဖုံးလွှမ်းသွားတဲ့ လေယာဉ်ကွင်း
မုန်တိုင်းဖျက်ဆီးမှုဟာ ကိုဗစ်-၁၉ ထက် ပိုဆိုးတယ်လို့ အနောက်ဘင်္ဂလားပြည်နယ် ဝန်ကြီးချုပ် မာမတာဘနာဂျီးက ဆိုပါတယ်။ အနောက်ဘင်္ဂလားပြည်နယ် မြို့တော် ကိုလ်ကတ္တားမှာ ကိုရိုနာကူးစက်ခံရသူ ၃၁၀၃ ယောက် အတည်ပြုထားပါတယ်။
“တနေရာပြီးတနေရာ အဖျက်ဆီးခံလိုက်ရပါတယ်။ ဒီနေ့မြင်ရတာက စစ်မြေပြင်တခုလိုပါပဲ”လို့ မစ္စဘနာဂျီးက ပြောကြောင်း Press Trust of India မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
အမ်ဖန်လို မုန်တိုင်းကြီးတွေ အဝင်များတဲ့နေရာ ဖြစ်ရတာ ဘာကြောင့်လဲ
အမ်ဖန်မုန်တိုင်းကြောင့် အိန္ဒိယနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာ မိုးကြီးနေ
တောင် ၂၄ ပါဂါနာခရိုင်၊ မြောက် ၂၄ ပါဂါနာခရိုင်နဲ့ အရှေ့မစ်နာပူး သုံးနေရာမှာ အဆိုးဆုံးလို့လည်း ဆိုပါတယ်။
ကိုလ်ကတ္တားအခြေစိုက် ဘီဘီစီ သတင်းထောက် အမီတဘားဘတ္တာဆာလီက ကိုလ်ကတ္တားနဲ့ အနီးအနားမြို့တော်တော်များများမှာ လျှပ်စစ်မီးမရတာ ၁၇ နာရီကြာသွားပြီလို့ ဆိုပါတယ်။
မုန်တိုင်း အဆိုးဆုံးတိုက်ခတ်ခံရတဲ့နေရာတွေမှာ မိုဘိုင်းဖုန်း ကွန်ရက်လည်း အလုပ်မလုပ်ဘူးလို့ ဘီဘီစီသတင်းထောက်က သတင်းပေးပို့ပါတယ်။
မြို့သူမြို့သားတွေ လူမှုကွန်ရက်မှာတင်ထားတဲ့ စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် ဗီဒီယိုတခုထဲမှာတော့ မုန်တိုင်းဒဏ်သင့် ကိုလ်ကတ္တား အနီးအနားက စည်ကားတဲ့ မြို့တမြို့မှာ လျှပ်စစ် ထရန်ဖော်မှာ ပေါက်ကွဲတဲ့ပုံကို တွေ့ရပါတယ်။
“ဘုရားဘုရား၊ ကံကောင်းလို့ ဘာမှမဖြစ်တာပါလား”လို့ မှတ်ချက်ပေးပြီး ရှယ်ထားတဲ့ဗီဒီယိုတခုထဲမှာတော့ အုတ်ကြွပ်မိုးတွေ လေထဲလွင့်ပါလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။
အမြစ်ကျွတ်ထွက်ပြိုလဲနေတဲ့ သစ်ပင်တွေ၊ ပြိုလဲနေတဲ့ ဓာတ်မီးတိုင်တွေ၊ ပြိုလဲနေတဲ့ မီးပွိုင့်တွေကိုလည်းဒေသတွင်းသတင်းတွေမှာ မြင်တွေ့ရပါတယ်။ ရေအပြည့်ဖုံးလွှမ်းနေတဲ့လမ်းတွေ၊ သစ်ပင်ပြိုလဲပြီး ပိကျခံရတဲ့ ကားတွေ၊ ကျိုးနေတဲ့ တံတားတွေကိုလည်း အများအပြားတွေ့ရပါတယ်။
သတင်းထောက်တွေဟာ ကိုဗစ်ကာကွယ်ဖို့ အတွက် နှာခေါင်းစွပ်တွေ တပ်ဆင်ပြီး မုန်တိုင်းကြားကနေ ခက်ခက်ခဲခဲ သတင်းပေးပို့နေကြတာကိုလည်း တွေ့ရပါတယ်။
“အပြင်ဘက်မှာ ငရဲပြည်ရောက်နေသလိုပဲ”လို့ ကဂျာဘာစု ဆိုသူက ဖေ့စ်ဘုတ်မှာမုန်တိုင်းဝင်စက ရေးသားခဲ့ပါတယ်။
မစ္စတာဘာစုဟာ ၁၂ ထပ်မြင့် အဆောက်အအုံမှာ နေထိုင်သူဖြစ်ပြီး သူ့အဆောက်အအုံဟာ ငလျင်လှုပ်သလို ဘယ်ညာယိမ်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
“သွပ်တွေမှန်တွေ ကွဲတဲ့ကျိုးတဲ့အသံတွေကြားရတယ်။ အုန်းပင်တွေ အမြစ်က ကျွတ်ထွက်ကုန်တယ်။ ဓာတ်ကြိုးတွေ ပေါက်ပြဲပြီး မီးပွားတွေ လွင့်စင်နေတာကို အနီးအနားမှာ ၃ နေရာလောက်တွေ့ရတယ်”လို့လည်း သူက ရေးထားပါတယ်။
ကိုရိုနာကြောင့် လော့ဒေါင်းချထားချိန်ဖြစ်လို့ လူအများစုဟာ မုန်တိုင်းဝင်ချိန် အိမ်မှာရှိနေကြပါတယ်။
တာဝန်ရှိသူတွေကတော့ ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း လာတော့မယ်ဆိုတာသိလို့ ပြီးခဲ့ရက်ပိုင်းကတည်းက ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်။
“သစ်ပင်တွေ ကျွတ်ထွက်ကုန်တယ်။ မီးတွေလည်းပျက်ပြီး ဓာတ်တိုင်တွေလည်း လဲကုန်တယ်။ ပြတင်းမှန်တွေလည်းကွဲကုန်တယ်။ အင်တာနက်လည်းပြတ်သွားပြီ။ ကလေးတွေ အော်ငိုနေကြတယ်”လို့ ဒေသခံတယောက်က ဘီဘီစီကို ပြောပြပါတယ်။
“တံခါးတွေ အကုန်လုံး ပိတ်ထားတာတောင် အပြင်ဘက်က အသံတွေနဲ့ တအိမ်လုံးဆူညံနေတာပါပဲ။ ၄၅ မိနစ်အတွင်း လမ်းတွေပေါ် ရေလျှံတက်လာတယ်။အိမ်အောက်ထပ်တွေ ရေမြုပ်ကုန်တယ်” လို့လည်း သူကဆိုပါတယ်။
“မုန်တိုင်းစဲလို့ မီးပြန်လာတော့ ကျွန်တော်တို့ ကလေးဘဝက မီးခဏခဏပျက်လို့ မီးပြန်လာရင် ဝမ်းသာအားရ အော်သလိုမျိုး အနီးအနားက ကလေးတွေက ဝမ်းသာအားရ သံပြိုင်အော်ကြပါတယ်။”
သြရိဿကမ်းခြေကို တစ်နာရီ လေတိုက်နှုန်း ၁၁၅ မိုင်နဲ့ ဝင်ခဲ့
အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်ဖို့ အတွက် ကိုရိုနာစည်းကမ်းတင်းကျပ်မှု တချို့ကို လျှော့ချပေးထားပါတယ်။
ကိုဗစ်-၁၉ ရဲ့ လူမှုအလှမ်းခွာရေး စည်းကမ်းကြောင့် ရွှေ့ပြောင်းရေး၊ ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေအပြည့်အ၀ ဆောင်ရွက်ဖို့ အခက်အခဲရှိပါတယ်။
၁၉၉၉ ခုနောက်ပိုင်းမှာ ဒါဟာ ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာ ဖြစ်ပွားတဲ့ ပထမဆုံး စူပါဆိုင်ကလုန်းဖြစ်ပါတယ်။ အခုအခါ မုန်တိုင်းဟာ အားပျော့လာပြီဖြစ်ပေမယ့် အလွန်အားကောင်းတဲ့မုန်တိုင်းအဆင့်အဖြစ် သတ်မှတ်ထားဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။
อัลบั้มภาพ ကိုလ်ကတ္တားမြို့ကို အမ်ဖန်မုန်တိုင်း ဝင်ရောက်နင်းချေ